दिउँसो वृद्धि भएको यातायात भाडा साँझ फिर्ता ! – The Public Today
दिउँसो वृद्धि भएको यातायात भाडा साँझ फिर्ता !
विजय कुमार सिंह जेठ ३०, २०७६ ४:४१ pm
काठमाडौं, जेठ ३० – सरकारले बिहीबार दिउँसो वृद्धि गरेको सार्वजनिक यातायातको भाडा साँझ फिर्ता लिएको छ। बिहिबार दिउँसो करिब ३ बजेतिर भाडा बढाएको सूचना जारी गरेको यातायात व्यवस्था विभागले ८ नबज्दै विज्ञप्ति जारी गर्दै फिर्ता गरेको छ।
विभागले छोटो दुरिका सवारीमा १२ प्रतिशत र लामो दुरिका सवारी साधनमा २० प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गरेको थियो।
५ घन्टा पनि नबित्दै बढेको भाडा किन फिर्ता भएको भनेर अहिले आम चासोको विषय बनेको छ। यही चासो हामीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा बुझ्ने प्रयास गरेका थियौं।
फिर्ता गर्नुको कारण चाँहि यस्तो छ :
विभागले यातायात भाडा वृद्धिको निर्णय गरे यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठसमक्ष पेस गर्‍यो। यातायात मन्त्री आफैंले निर्णयमा प्रमाणित गर्न पनि सक्थे तर उनले कार्यबाहक प्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलसमक्ष सोधे।
कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री पनि देशमा नभएको अवस्था र संसदमा बजेटका विषयमा छलफल चलिरहेको साथै प्रतिपक्षीको विरोध पनि उतिकै रहेकाले मन्त्री महासेठलाई विभागको भाडा बढाउने निर्णयमा पछि हट्न सुझाव दिएका थिए।
यसका साथै कार्यबाहक प्रधानमन्त्री पोखरेलले तत्कालका लागि भनेर गत सरकारले दशैंअघि १० प्रतिशत भाडा बढाएको र त्यसमा नै थप भएको भन्दै असन्तुष्टि राखेका थिए।
दशैंअघि भाडा बढाउँदा अध्ययन कमिटीको सिफारिसमा भाडा बढाउने भनेका थियो। तर, विभागले अस्थाई रुपमा बढाएको भाडा बदर नगरी त्यही भाडामा नै थप हुने गरी बिहिबार भाडा बढाएको भन्दै कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीले पछि हट्न सुझाएका थिए।
यसपछि यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले हस्ताक्षर गर्न मानेनन्। यसपछि भाडा बढाउने निर्णय फिर्ता भएको यातायात मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। विभागले बढाएको भाडा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पारित हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
‘मन्त्रीले वृद्धि भएको भाडादर हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि विभागले तत्कालको लागि फिर्ता गरेको हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। मन्त्री महासेठले भाडा बढाउने विभागको निर्णय नमानेका कारण विभागको भाडा बढाउने निर्णय ५ घन्टा पनि नबित्दै तत्कालका लागि स्थगित भएको हो।